Ndị na-ere ọgwụ
Chemical Chemical mebere Carbomer
Daily Chemical mezuwo Polyethylene Glycol
Environmental Friendly Rubber mgbasa
Environmental Friendly Rubber Esịtidem akpụzi Hapụ Ukwu
Ọgwụ Ọgwụ Polyethylene Glycol
Ọgwụ Carbopol nke Ọgwụ
Polyethylene Glyeol 300 PEG ...
Polyethylene Glycol 6000 Pee ...
Chemical Name: Cross-linked Polyacrylic Acid Resin Molekul Structure: - [-CH2-CH-] N-COOH. Mmiri Ọdịnaya%: ≤2.0% Viscosity: 29400 ～ 39400 mPa.s Carboxylic acid Content%: 56.0—68.0% Heavy Metal (ppm): ≤20ppm Residual Solvents%: -60 ppm Njirimara: O nwere nkwụsi ike na-adịgide adịgide na viscosity dị elu , na ọ ga-adaba adaba maka nlekọta ọnụ n'ihi obere obere ihe mgbaze. Nso nke Ngwa: Oral in take, በከፊል ochichi na a ọhụrụ nnyefe usoro, con ...
Ngwaahịa a bụ acrylic acid bonded allyl sucrose ma ọ bụ pentaerythritol allyl ether polymer. Dị ka ngwaahịa akọrọ, ọdịnaya nke carboxylic acid group (- COOH) kwesịrị ịbụ 56.0% - 68.0%. Chemical Name: Cross-linked Polyacrylic Acid Resin Molecular Structure: - [-CH2-CH-] N-COOH Ọdịdị: White rụrụ ntụ ntụ Uru Uru: 2.5-3.5 Mmiri Mmiri%: ≤2.0% Viscosity: 30000 ～ 40000 mPa.s Carboxylic acid Content%: 56.0—68.0% Heavy Metal (ppm): ≤20ppm Residual Solvents%: ≤20ppm Njirimara: Ọ h ...
Chemical mejupụtara: ethylene oxide condensate :dị: nkọwapụta nonionic: PEG200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Isi Ngwa: A na-ejikarị ọnụ mmiri eme ihe maka ngwọta ọnụ yana mmiri mmiri ndị ọzọ, karịsịa ọ nwere ezigbo solubilization maka propolis dị na propolis usoro ahụike-elekọta ngwaahịa, dịka ọmụmaatụ, ọnụ propolis, soft capsules na na. Mbukota Method: 50kg plastic drum adị ndụ: afọ atọ Quality Standard: CP2015 Nchekwa a ...
Isi Ngwa: Ngwaahịa a bụ nke na-adịghị egbu egbu, na-adịghị ewe iwe ma nwee ezigbo mmiri mmiri, ndakọrịta, mmanu, nrapado na nkwụsi ike ọkụ. Ya mere, usoro PEG-300 dabara adaba iji kwadebe capsules dị nro. Ọ nwere nkwekọrịta sara mbara na ọtụtụ ihe mgbaze, yabụ ọ bụ ezigbo ihe mgbaze na solubilizer ma na-ejikarị ya eme ihe n'ime mmiri, dị ka ngwọta ọnụ, anya mmiri, wdg. Ingzọ Mbukota: 50kg plastic drum shelf shelf ndụ: afọ atọ Ogo Standard: CP2015 Nchekwa na ...
PEG 4000 Iwu polyethylene Glyeol 4000
Main Ngwa: mbadamba, film-kootu, ọgwụ, capsules, suppositories na na. Dị ka usoro mmepụta, plasticity nke polyethylene glycol, ikike ya iji melite ikike mbadamba nke ịhapụ ọgwụ yana PEG (PEG4000 na PEG6000) nwere oke dị arọ dị oke uru dị ka nrapado iji mee mbadamba. Polyethylene glycol nwere ihe na-egbu maramara ma dịkwa mma ma sie ike mmebi. Na mgbakwunye, PEGS ole na ole (PEG4000 na PEG6000) nwere oke dị arọ nwere ike igbochi njikọta ...
Carbopol, nke a makwaara dị ka carbomer, bụ acrylic crosslinking resin crosslinked na acrylic acid site pentaerythritol na na. Ọ bụ ezigbo ihe na-eme ka ọ bụrụ onye na-ekwu okwu banyere ịkọwa ihe. Mgbe neutralization, Carbomer bụ ihe magburu onwe jel matriks na ndim, nkwusioru na ndị ọzọ dị mkpa ojiji. Ọ nwere usoro dị mfe na nkwụsi ike dị mma. A na-ejikarị ya eme ihe na emulsion, ude na gel. Chemical Name: Cross-linked Polyacrylic Acid Resin Molekul Structure: - [-CH2-CH-] N-COOH Ọdịdị: ọcha rụrụ powde ...
Chemical Name: Cross-linked Polyacrylic Acid Resin Molecular Structure: - [-CH2-CH-] N-COOH Ọdịdị: White rụrụ ntụ ntụ PH Uru: 2.5-3.5 Ọdịnaya Ọdịnaya%: ≤2.0% Viscosity: 2000 ～ 11000 mPa.s Carboxylic Acid Content%: 56.0—68.0% Heavy Metal ppm: ≤20ppm Residual Solvents%: ≤60ppm Na-atụ aro usoro onunu ogwu nke Carbopol 971: 0.2-1.0% Electrolyte nwere nlekọta anụ emulsion, ude, uzo uzo nwere mmanya, uzo nlekọta nlekọta gel, ntutu ntutu jel, ncha ntutu na mmiri ịsa ahụ. Ihe njirimara ...
Carbopol 941: ogologo eruba, obere viscosity, doo anya dị elu, iguzogide ion na ịkwa osisi, nke kwesịrị ekwesị maka gel na emulsion. Chemical Name: Cross-linked Polyacrylic Acid Resin Molekul Structure: - [-CH2-CH-] N-COOH Ọdịdị: ọcha rụrụ ntụ PH Uru: 2.5-3.5 Ọdịnaya Ọdịnaya%: ≤2.0% Viscosity: 4000 ～ 11000 mPa.s Carboxylic Acid Content%: 56.0—68.0% Heavy Metal (ppm): ≤20ppm Residual Solvents%: -0.2% Product Lntroduction Ngwaahịa bụ acrylic polymer na polyenyl ether cross ...
Carbopol, nke a makwaara dị ka carbomer, bụ acrylic crosslinking resin crosslinked na acrylic acid site pentaerythritol na na. Ọ bụ ezigbo ihe na-eme ka ọ bụrụ onye na-ekwu okwu banyere ịkọwa ihe. Mgbe neutralization, Carbomer bụ ọmarịcha gel matriks na ndim na nkwusioru. Ọ dị mfe, kwụsie ike ma jiri ya mee ihe na emulsion, ude na gel. Chemical Name: Cross-linked Polyacrylic Acid Resin Molecular Structure: - [-CH2-CH-] N-COOH Ọdịdị: ọcha rụrụ ntụ ntụ PH Uru: 2.5-3.5 Ọdịnaya Ọdịnaya%: ≤2.0% ...
Carbopol 934: resin polyacrylic acid resin na njikọta, usoro nnyefe ọgwụ mpaghara, kwụsie ike na viscosity dị elu, eji gel, emulsion na nkwusioru. Chemical Name: Cross-linked Polyacrylic Acid Resin Molecular Structure: - [-CH2-CH-] N-COOH Ọdịdị: White rụrụ ntụ ntụ PH Uru: 2.5-3.5 Ọdịnaya Ọdịnaya%: ≤2.0% Viscosity: 30000 ～ 40000 mPa.s Carboxylic Acid Content%: 56.0—68.0% Heavy Metal (ppm): ≤20ppm Residual Solvents%: -0.2% Njirimara: Mmetụta na-esi ike dị mma, ọ nwere na-adịgide adịgide ...
Polyethylene Glyeol nke 6000
A na-eji ọgwụ polyethylene glycol eme ihe n'ọtụtụ ọgwụ, dịka injections, nkwadebe elu, nkwadebe anya, nkwadebe nke ọnụ na imezi. Enwere ike ịgbakwunye polyethylene glycol siri ike na mmiri polyethylene glycol iji dozie viscosity maka ude mmiri; Enwere ike iji ngwakọta polyethylene glycol mee ihe dị ka matrix suppository; polyethylene glycol aqueous solution nwere ike iji dị ka nkwusioru enyemaka ma ọ bụ iji dozie viscosity nke ndị ọzọ nkwusioru media; polyethylene glycol na o ...
Carbomer 980 bụ ihe eji arụ ọrụ. Carbomer bụ polymer dị elu nke acrylic acid allylic sucrose ma ọ bụ pentaerythritol allyl ether. Ọ na-abụkarị ọcha ọcha micro acidic ntụ ntụ. Ọ nwere ike ịmepụta oke arụmọrụ na-eme ka ọ dị elu n'okpuru usoro onunu ogwu, wee si otú a na-emepụta ọtụtụ viscosity na ihe omimi nke emulsion, cream, gel and transdermal planning Njirimara nke carbomer dị iche iche dịtụ iche. Dị dị iche iche na-anọchite anya viscosities dị iche iche, ya mere ha bụ ...
Qingdao Yinuoxin New Ihe Co., Ltd.